Obsa Archives - Ibsaa Jireenyaa
Fakkeenyota Ajaa’iba Balaa irratti Obsuu-3
May 8, 2020 Sammubani Leave a comment
2-Obsa Nabii Ayyuub (Aleyh salaam)–kutaa 2
Kutaa darbe keessatti obsa Nabii Ayyuub ilaalle turre. Har’as itti fufuun kutaa dhumaa ni ilaalla. Rabbiin olta’aan Nabii Ayyuubin ilaalchisee ni jedha:
May 3, 2020 Sammubani Leave a comment
Wantoota namni ittiin qoramu keessaa rakkoo fi wantoota jibbamoodha. Rakkooleen yommuu namatti bu’an namni wanta lama yaadachun hadhaa obsaa laaffisu danda’a: 1ffaa-Rakkooleen badii fi cubbuu namarraa haxaawu, 2ffaa-sababa obsaatiin mindaa guddaa argatan. (Dhugaa kanaa seenaa irraa fakkeenyaan kutaa dhumaa keessatti ni ilaalla. In sha Allah).
May 2, 2020 Sammubani Leave a comment
Rakkooleen zanbii (badii) haaqu
Mu’minni Rabbiin hamma obsa isaatii fi hammam Gooftaa isaa irraa akka jaallatu ifatti baasuf, akkasumas, mindaa guddaa isa biratti isaaf katabuuf akka isa qoru yommuu beeku, rakkoolee obsaan baadhata ykn danda’a.
April 30, 2020 Sammubani One comment
Bismillah. Qananii keessattis ta’i yeroo rakkoo obsi wanta garmalee barbaachisaa fi hafuu hin qabneedha. Waa’ee obsaa waggaa sadiin dura mata-duree “Obsa:Furtuu milkaa’inna fi Gammachu” jedhu jalatti ilaalle turre. Kana haa ilaallu malee, irra deddeebinee obsa waliif dhaamun warroota kasaaraa jalaa nagaha bahan keessaa nu taasisa. Qur’aana keessatti:
Ittı Haa Fufnu
April 15, 2020 Sammubani Leave a comment
Sodaa fi Rakkoo Booda Gargaarsi fi Injifannoon yommuu dhufu
Hanga ammaatti duula Khandaq/Ahzaab keessatti sodaa fi rakkoo cimaa Muslimoota muudate ilaalaa turreera. Wanta qormaata kanarraa barbaadamee fi haala namootaas hubanne jirra. Kuni nuuf barnoota guddaa ta’a. Amma gara xumuraatti dhufaa jirra. Qormaata sodaatii fi rakkoo booda gargaarsi fi injifannoon ni dhufa. Kunoo qormaata cimaa san booda gargaarsi fi injifannoon ni dhufe:
April 10, 2020 Sammubani Leave a comment
Kutaa darbe keessatti yeroo sodaa fi rakkoo cimaa amaloota munaafiqota ilaalle turre. Akka yaadachisaatti munaafiqonni yeroo sodaa fi rakkoon dhalatu, garmalee sodaan guuttamu. Akka nama du’uu ijji isaanii naannofti. Lola irraa ni dheessu. Garuu rakkoo fi sodaan erga deeme booda dubbiin goottota. Hojiin dabeessota, dubbiin goottota. Namoota dhugaa cimanii hojjatanii fi hawaasaa Muslimaa irraa badii deebisuuf carraaqan arraba isaanii qaraan rakkisu. Amalli isaanii badaan biroo waadaa Rabbii fi Ergamaan Isaa galan hin dhugoomsan, itti hin amanan. Kanaafu, hojiin isaanii Rabbiin biratti fudhatama hin qabu.
April 8, 2020 Sammubani Leave a comment
Kutaa darbee keessatti yeroo lolaa fi sodaa haala munaafiqotaa ilaalle turre. Achirraa itti fufuun haala isaanii xumuraa ni ilaalla: